Baro Ganacsi | Free Signal Forex | Iskuulka Ganacsiga ugu Fiican Caalamka
HELI CALAAMADAHA VIP FOREX
Warkii EUR / USD
Xisaabaadka Lacagta ee Forex
Nidaamyada Ganacsi ee ugu Fiican
Tusmooyinka Forex ee ugu Fiican
Kooxaha Telegramka Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah 2021
Xisaabta Forex Demo
Xisaabaadka Mini & Micro
Lacagta loo yaqaan "Forex Accounts"
Maareynta Xisaabaadka PAMM
Baro Sida Loo Ganacsado Crypto
Baro Sida Loo Ganacsado Bitcoin
Kooxaha Telegram Calaamadaha Bilaashka ah ee Bilaashka ah 2021
Istaraatijiyadaha Ugu Wanaagsan ee Ganacsiga
Iibso Seeraar Kaarka Amaahda
Iibso Seeraar Kaarka Lacagta
Sida loo iibsado Ethereum
Macdanta "Cloud Cloud Mining"
Dib-u-eegista Wareegga Bitcoin
Dib-u-eegista Dijital ah ee Bitcoin
Dib u eegista Bitcoin
Waa maxay suuqa Suuqa
Baro Ka Ganacsi Saamiyada
Baro Maalinta Ganacsiga
Istaraatijiyada Maalgalinta Maalmeedka
Baro Ganacsiga Sicirka Waxqabadka
Waa maxay Pips Forex
Baro Ganacsiga Swing
Sida Loo Isticmaalo Kabaalaynta
Sida loo Maareeyo Faafitaankaaga
Sidee loo Ganacsadaa Madaxa
Sida loo Gaabiyo Kaydka
Sida loo Isticmaalo Margin Marka Ganacsi
Calaamadaha Saamiyada ee ugu Fiican
Si otomatig ah Ugu Nuqul Ganacsigeenna eToro
Barnaamijyada Ganacsi ee ugu Fiican
Xisaabaadka Ganacsiga ee UK
Ka ganacsiga Index
Qiimaha Waxqabadka Ganacsiga PDF
Ganacsiga Penny Stock
Is Forex Trading Xalaal Ma Tahay
Xisaabaadka Ganacsiga Islaamka
Ganacsatada ugu Fiican eToro
Dillaaliinta Dahabka ah
Ikhtiyaarrada Ikhtiyaarrada ah
Dulaaliinta ASIC ee ugufiican
Dullaaliinta CFTC ee ugufiican
Dulaaliinta ugu Fiican ee CySEC
Dulaaliinta ugu Fiican FCA
Dullaaliinta ugu Fiican SEBI
Qalabka loo yaqaan 'Cryptohopper'
Dib u eegista EuropeFX
Dib u eegista Libertex
Dib-u-eegista Suuqyada Adduunka
Bixiyaha Calaamadaha Caalamiga ee ugu Fiican
Suuqyada adduunka ee farahaaga
wakhti kasta, meel kasta
Ku soo biir Telegram-keena Calaamadaha Bilaashka ah!
Wareejinta Toddobaadka ah
BTC, ETH, XRP & LTC Muuqaalka Farsamada
75% xisaabaadka tafaariiqda CFD ayaa lumiya lacag
Bilow Helitaanka Calaamadaha Bilaashka ah Hadda!
Illaa 10 Saxiix sax ah, Calaamado faa'iido leh Maalintii
Helitaanka fudud ee Forex iyo Crypto Signals
Falanqaynta farsamada maalinlaha ah iyo talooyinka ganacsiga
Beel ka badan 15,000 ganacsato firfircoon
Digniinta-waqtiga dhabta ah, oo dhan iyada oo loo marayo Telegram!
Ku soo biir Kooxda Telegram
Digniinta degdegga ah ee emaylkaaga
Inta udhaxeysa 4-5 Saxiix, Calaamado faa'iido leh Maalintii!
Falanqaynta Farsamada Maalinlaha ah iyo Talooyinka Ganacsi
Xogta Shaqada Xoog leh ayaa Kordhinaysa Dollarka Kanada, Maaddaama Sterling uu kujiro Cadaadis Suuqyada Deggan
Doolarka Kanadiyaanka ayaa si xowli ah kor ugu kacay kalfadhigii hore ee Mareykanka, waxaana caawiyay xog aad ufiican oo kafiican tii la filayay. Warbixinta shaqaalaynta Kanada ee Maarso ee la sii daayay Jimcihii waxay ka fiicnayd sidii la filayay. Falanqeeyayaasha Bangiga Qaranka ee Kanada waxay xusayaan in Kanada aysan wali sheegan guul, maadaama khasaaro cusub ay u badan tahay inay dhacdo Abriil. Xogta billaha ah ee ay soo saarto tirakoobka Kanada ayaa muujisay […]
Warbixinnada Robinhood ee 450% Kordhinta Crypto Trading ee Q1 2021
Shirkada caanka ah ee bixisa dulaalinta ee khadka tooska ah ee Mareykanka Robinhood ayaa dhawaan soo warisay in tirada isticmaaleyaasha ka ganacsada lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ay ku korortay lix jeer Q1 2021. Sida laga soo xigtay boosteejo ay ku taariikhaysan tahay 8-dii Abriil, Robinhood ayaa shaaca ka qaaday in wadar ahaan 9.5 milyan oo isticmaaleyaal ah ay ka ganacsadeen barxadeeda rubuca hore ee 2021 oo keliya, a […]
USOIL (WTI) Ganacsiyo Sicir-dhimis ah sida iibsadayaasha iyo iibiyeyaashu waxay gaarayaan xilli go'an
Heerarka Is-adkaynta Muhiimka ah: $ 66.00, $ 70.00, $ 74.00 Heerarka Taageerada Muhiimka ah: $ 48.00, $ 44.00, $ 40.00 USOIL (WTI) Isbedelka Muddada-Dheer: RangingUSOIL waxay hore ugu jirtay kor u kac. WTI waxay la kulantay diidmo $ 67.50 iska caabin. Suuqa ayaa hoos udhacay $ 57.50 hooseeya wuxuuna dib u bilaabay dhaqdhaqaaq xaddidan. Waqtigaan la joogo, WTI waxay is bedbeddelaysaa inta u dhexeysa heerarka $ 57.50 iyo $ 67.50. Laga soo bilaabo Maarso 18, USOIL waxay ku jirtay meelo kala duwan […]
Falanqaynta Qiimaha Tron - Abriil 9
Tron (TRX) ayaa soo dhejisay wax ka badan 140% faa'iidooyinka labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxayna wali muujineysaa rajo caafimaad oo ku saabsan guulo dheeri ah muddada dhow. Sida laga soo xigtay warbixinnada qaar, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah qodobbada aasaasiga ah ee aasaasiga u ah rajada laga qabo in la gaaro guulo dheeri ah ee loo yaqaan 'cryptocurrency' lix iyo tobnaad. Marka hore, shabakada Tron waxay bilaabeysaa […]
Ka soo kabashada EURJPY Heerkii 130.00, Yen oo Cadaadis ku Saabsan yahay Soosaarka Mareykanka
Falanqaynta Qiimaha EURJPY - Abriil 9 Inta lagu gudajiray fadhigii jimcaha ee yurub, EURJPY waxay uumi ka qaadataa soo kabashada maalinta kahor heerka 130.00 waxayna kusii socotaa daba galka heerar sare oo kudhowaad gobolada 131.00. Labada lamaane waa inay ka gudbaan xayiraadda 130.66 ee dusha sare si loo hagaajiyo jaranjarooyinka heerka 131.00. Shirkadda maalinlaha ah […]
Dahab ayaa dib u tijaabinaya 1745
Taageerada Muhiimka ah: 1745 Resistance Key: 1760 - 1790 Dahabku wuxuu uruuriyay 4.80% tan iyo markii uu hoos ugu dhacay heerka 1678-1680 usbuucii hore. Weli waxaan nahay kuwo dhaadheer oo aad uxun oo macdan qaali ah waxaana shalay qiimaha lagu jabiyey heerkii muhiimka ahaa ee muhiimka ahaa (1745) taasi oo ahayd heerkii ay dib ugalaabatay Juun 2020 si waqtiga oo dhan looga dhigo mid sareeya…
Lugta EUR / AUD Lugta Sare Kaarka!
EUR / AUD waxay ku faantaa aag adag oo iska caabin ah ka dib markay ka boodaan qaar ka mid ah caqabadaha muddada-dhow. Labaduba waxay muujiyeen calaamado dib u noqosho ah, laakiin weli waxaan u baahan nahay xaqiijin intaannaan dheereyn. Tallaabada qiimaha ayaa muujisay in hoos udhaca dhaqdhaqaaqa uu dhammaaday iyo in labada lammaane ay horumarin karaan lug cusub. Isbeddelku wuu sarreeyaa muddada gaaban, […]
Iibiyey / JPY
GBP / JPY waxay kusii socotaa Hoos udhacyadeeda, Waxay Kaheli Kartaa Taageero Heerka 149.57
Heerarka Is-adkaynta Muhiimka ah: 150.000, 152.000, 154.000 Heerarka Taageerada Muhiimka ah: 146.000, 144.000, 142.000 GBP / JPY Qiimaha Muddada-dheer: BullishGBP / JPY waxay ku jirtaa kor u kac laakiin hadda waxay diidmo ku tahay heerka 153.00. Pound-ka ayaa hoos u dhacaya ka dib markii la diiday heerkii ugu dambeeyay. Qiimaha Pound-ka ayaa jebiyey 21-ka maalmood ee SMA wuxuuna kusii dhowaanayaa 50-ka SMA. Nasasho ka hooseysa […]
Binance (BNBUSD) Qiimaha Kordhin Kara ilaa $ 485 La Bixiyay $ 420 Heerka Ma Hayo
BNBUSD Falanqaynta Qiimaha - Abriil 09 Kordhinta qiimaha dheeri ah ayaa loo maleynayaa illaa iyo inta dibiyadu ay sii wadaan ama kordhiyaan xawaarahooda isla markaana heerka iska caabinta ee heerka $ 420 la dhex geliyo, ka dib, heerka iska caabinta ee $ 485 iyo $ 545 waa la tijaabin karaa. Burburka heerka qiimaha $ 364 wuxuu qaayaha u soo bandhigi doonaa $ 311 iyo $ 254 […]
Polkadot (DOT) waxay jabisaa iska caabinta $ 40, waxay dib u bilaabi doontaa Uptrend
Heerarka Muhiimka ee Cadaadiska: $ 40, $ 42, $ 44 Heerarka Taageerada Muhiimka ah: $ 30, $ 28, $ 26 Polkadot (DOT) Qiimaha Isbedelka Mudada-Dheer: BullishOn Abriil 2, iibsadayaashu waxay riixeen qiimaha DOT ee ka sarreeya $ 40 caabbinta. Altcoin wuxuu isu uruuriyay $ 46.74 sare laakiin waa la iska caabiyey. Kala bixitaankan, crypto wuxuu jebiyey dhaqdhaqaaqii kala duwanaa ee Febraayo 20. Sikastaba, 48-dii saac ee lasoo dhaafay, lacagta [coin]
Ku suuq garee suuqyada
SIXIIXYADA SHAQAALAHA BEST
raaca bilaash ah calaamadaha Forex on cryptocurrencies, badeecadaha, iyo indices
Nuqul ganacsatada ugu fiican
Fursadaha suuqyada ku qabso ugu fiican dilaaliinta Forex
Baro inaad ka Ganacsato Xeeladaha Forex iyo Wararka
SHAQAALAHA SHAQAALAHA &
Tilmaamaha ugu dambeeya ee loo yaqaan 'Forex Brokers'
Shaki la'aan, dillaalku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa suuqa Forex. Laakiin bilow ahaan, ma fahantay doorka ay dulaaliintu ciyaarayaan? Akhriso kaayaga Tilmaamaha 'dilaaliinta' Forex halkan si aad u ogaatid doorarka asaasiga ah ee dilaalka Forex.
Ganacsi fara badan waa in loo sameeyaa sidii cusub oo ku saabsan suuqa Forex, laakiin markaa (markale), waxaad u baahan tahay meesha ugu fiican ee ganacsiga forex si aad u sameyso xirfadahaaga. Taasi waa sababta boggayaga halkan ayaa sharxaya meheradaha ganacsi ee ugu wanaagsan ee bilowga ah.
Hayso joornaal Ganacsi
Joornaalka ganacsiga ayaa kaliya diiwaanka dhammaan howlahaaga ganacsi. Caadi ahaan, joornaalku wuxuu qalab u siiyaa ganacsato kasta oo daran oo u baahan inay naftooda u qiimeeyaan si macquul ah. Laakiin waa maxay muhiimadda ay leedahay in la hayo joornaal gaar ah? Aan kuu sheegno dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad ogaato halkan.
Akhriso Qiimaha Dulsaarka
Isbedelada dulsaarka dulsaarka ayaa saameyn weyn ku leh suuqa suuqyada. Isbedelada sida caadiga ah waxaa sameyn kara mid ka mid ah sideeda bangiyada dhexe ee adduunka. Isbedelada ayaa saameyn deg deg ah ku yeelanaya ganacsatada suuqa, sidaa darteedna, fahamka sida looga fal celiyo iyo waliba saadaalinta dhaq dhaqaaqyadan ayaa ka mid noqon doona kuwa ugu horeeya tallaabooyinka lagu kasbanayo faa'iidada sare.
Soo Dhaweyn Email
Guul Maalintii Koowaad
Baro Ganacsiga Haddii aad hadda uun ka bilaabayso adduunka Ganacsiga online, hubaal waad timid meesha saxda ah. Websaydhkeennu wuxuu kugu hubin doonaa dhammaan qalabka loo baahan yahay si xirfaddaada ganacsi aad uga baxdo lugta midig.
Waxaan bixinaa hagisyo dhameystiran oo ku saabsan wax walba oo ganacsi - sida sida warshadaha forex-trillion pound ay u shaqeeyaan, waxa CFDs yihiin iyo sababta ay muhiim ugu yihiin yoolalkaaga maalgashiga muddada-dheer, ka faa'iideysiga, faafitaanka, amarrada suuqa, iyo wax kasta oo kale waxaan u maleyneynaa inaad ogaatid kahor intaadan bilaabin inaad qatar geliso dhaqaalahaaga.
Muhiimad ahaan, markaad kubixiso waqtiga lagama maarmaanka u ah daalacashada qalabkeena waxbarasho ee badan, waxaad uga tagi doontaa barxadayada xirfadaha loo baahan yahay iyo aqoonta si aad ugu guuleysato dadaalkaaga ganacsi ee khadka tooska ah.
Ka Ganacsi Bilowga: Sidee Ganacsi Online ah u shaqeeyaa?
Haddii aadan waligaa hal ganacsi hal noloshaada dhigin, waxaa aasaasi ah inaad ogtahay waxaad sameyneyso kahor intaadan lacagtaada kala bixin. Si kastaba ha noqotee, ka ganacsiga internetka wuxuu la yimaadaa haliso badan - kuwaas oo badankood caqabad ku noqon kara awooddaada inaad sameyso faa'iido isdaba joog ah. Sidan oo kale, aan ku bilowno helitaanka aragtida guud ee 360-ka ah ee habka ganacsiga dhammaadka-dhamaadka.
Doorashada Dilaal Online ah
Si aad uga ganacsato khadka tooska ah, waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato dillaal. Waqti dheer ayaa la maray maalmihii aad ubaahantahay inaad dhigatid iibinta iyo iibinta amarrada taleefanka oo leh saamile dhaqameed.
Taas bedelkeeda, wax walba hadda waxaa lagu fuliyaa khadka tooska ah. Xaqiiqdii, maahan oo keliya inaad ka ganacsan karto raaxada gurigaaga, laakiin inta badan dilaaliinta internetka ayaa hadda bixiya barnaamijyo ganacsi oo si buuxda u shaqeeya. Sidan oo kale, hadda waad ganacsan kartaa intaad guureyso.
Markii sidaa la yidhi, waxaa jira kumanaan dillaaliin khadka tooska ah ka shaqeeya oo u adeega macaamiisha tafaariiqda maalin kasta. Dhinaca kale, tani aad ayey faa'iido ugu leedahay aragtidaada adigu ganacsade ahaan, maadaama oo aad looga dheregsan yahay meheradaha macnaheedu waa in dallaaliintu ay qasab ku yihiin inay kor u qaadaan tartanka.
Tani waxay ku imaan kartaa qaab ujrooyin ganacsi oo hoos u dhacay iyo faafitaan adag, ama astaamo cusub sida 'Nuqul Ganacsi'. Dhinaca kale, tani waxay ka dhigeysaa mid aad u adag in la ogaado nooca meheradda ganacsiga ee internetka ah ee la iska diiwaangelinayo.
Sideed ku Xulataa Madal Ganacsi oo Online ah?
Si lagaaga caawiyo jidka, waxaan soo taxnay qaar ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad dooranayso dillaal internetka ah.
Si loo bixiyo adeegyo ganacsi oo toos ah macaamiisha tafaariiqda ee fadhigoodu yahay Boqortooyada Midowday, dilaaliinta waa in ay xukumaan Hay'adda Dhaqanka Dhaqanka (FCA). Sidan oo kale, tani waa shuruud aan gorgortan laga geli karin markay tahay xulashada barxad cusub.
Xaaladaha badankood, dillaalka khadka tooska ah wuxuu qori doonaa nambarkiisa diiwaangelinta FCA, oo aad markaa ka gudbin karto tixraaca adoo adeegsanaya websaydhka jaangooyaha. Haddii kale, waxaad ka raadin kartaa magaca dallaalka khadka tooska ah adoo adeegsanaya diiwaanka FCA. Ugu dambeyntiina, haddii dillaalku uusan heysan rukhsadda FCA, waa inaad ka fogaataa barxadda dhammaan kharashyada.
Ments Lacag bixinta
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tixgeliso habka lacag bixinta ee aad doorbideyso inaad isticmaasho markay tahay lacag dhigista iyo ka noqoshada lacagaha. Habka ugu fudud ee tan lagu sameyn karaa waa iyada oo loo marayo kaarka amaahda ama kaarka deynta, maadaama lacagaha la dhigto ay yihiin kuwo deg deg ah.
Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah dallaaliinta ayaa kuu oggolaanaya inaad isticmaasho jeebka elektarooniga ah sida PayPal ama Skrill, in kasta oo taasi had iyo jeer aysan ahayn kiisku. Intaa waxaa sii dheer, dilaaliinta badankood waxay taageeraan wareejinta bangiyada. In kasta oo ay taasi badanaa oggolaato xadka sare, wareejinta bangiyada ayaa ah xulashada lacag-bixinta ugu gaabiska ah.
Lacagaha iyo Fiditaanka
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso khidmad nooc ah si aad ugu isticmaasho barxad ganacsi oo internetka ah, maadaama dilaaliintu ay ku jiraan ganacsiga lacag sameynta. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bixiso guddi isbeddel ah, oo ah boqolkiiba inta aad ka ganacsato. Tusaale ahaan, haddii aad dhigto ganacsi qiimahiisu yahay ,4,000 0.2, oo dallaalku ku dallaco 8% guddiga, markaa waxaad ku dambeyn doontaa bixinta £ XNUMX khidmadaha.
Dusha sare ee guddiga, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tixgeliso faafitaanka. Tani waa faraqa u dhexeeya qiimaha 'iibso' iyo 'iibiya'. Haddii faafitaanku aad u sarreeyo, markaa waxay saameyn toos ah ku yeelan doontaa awooddaada inaad ku kasbato faa'iido isdaba joog ah. Tusaale ahaan, haddii faafitaanku gaadhayo boqolkiiba boqolkiiba dunida dhabta ah, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso ugu yaraan 1% kaliya inaad jebiso xitaa.
Inst Qalabka Dhaqaalaha
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tixgeliso xoogaa tixgelin ah oo ku saabsan lambarka, iyo nooca, qalabka maaliyadeed ee uu martigeliyay dillaalku. Inta badan kiisaska, meheradaha ganacsiga ee internetka ayaa dabooli doona forex iyo CFDs. Marka laga hadlayo tan hore, waa halkaad ka iibsanayso oo aad ku iibinayso lacagaha, iyada oo la eegayo ka faa'iideysiga dhaqdhaqaaqyada qiimaha yar.
Marka laga hadlayo CFDs (qandaraaska-ku-kala-duwanaanta), tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku mala-awaasho ku dhowaad nooc kasta oo hanti ah, adigoon u baahnayn inaad lahaato hantida aasaasiga ah. Tusaale ahaan, CFDs waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka ganacsato wax kasta oo ka soo gala saamiyada iyo saamiyada, dahabka, saliidda, gaaska dabiiciga ah, tusmooyinka suuqa saamiyada, dulsaarka dulsaarka, mustaqbalka, iyo xitaa kripto.
Tools Qalabka Ganacsiga
Waxaad kufiicantahay inaad adeegsatid dillaaliin xooga saaraya tilmaamayaasha farsamada. Qalabka noocan oo kale ah ayaa kuu oggolaanaya inaad falanqeyso isbeddellada qiimaha taariikhda ee arrin horumarsan. Markaad sidaas samaynaysid, waxaad taagan tahay fursadda ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee lagu qiimeyn karo halka ay u socon doonto jihada mustaqbalka ee hantida aad dooratay.
Tilmaamayaasha farsamada ee caanka ah waxaa ka mid ah oscillators stochastic, celceliska dhaqdhaqaaqa (MA), index index xoog (RSI), iyo bollinger band. Ugu dambeyntiina, waa inaad doorataa barnaamijyada ganacsiga ee internetka oo bixiya daraasiin tilmaamayaal farsamo ah.
🥇 Cilmi baaris
Helitaanka aaladaha cilmi baarista sidoo kale waa qodob muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso markaad dooranayso barxad ganacsi oo cusub. Tani waa inay kujirtaa cusbooneysiinta wararka waqtiga-dhabta ah ee laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan hanti gaar ah ama warshado gaar ah.
Intaa waxaa sii dheer, sidoo kale way faa'iido leedahay markii dilaaliintu leeyihiin qayb falanqeyn u heellan. Tani waa halka ganacsatada khabiirku ay ku daabacaan aragtidooda ku saabsan halka hanti gaar ah ay u badan tahay inay u dhaqaaqdo suuqyada muddada-gaaban.
Ku fur koonto Madal Ganacsi Online ah
Markaad dooratid dillaal internetka ah oo buuxiya baahiyahaaga, markaa waxaad u baahan doontaa inaad furto koonto. Nidaamka diiwaangelintu badanaa wuxuu qaataa wax aan ka badnayn 5-10 daqiiqo. Asal ahaan, dallaalku wuxuu u baahan yahay inuu ogaado cidda aad tahay, iyo inaad haysato khibrad loo baahan yahay inaad ka ganacsato khadka tooska ah ama haddii kale. Tani waa in la hubiyo in barxadku uu wali u hoggaansamayo qawaaniinta ay soo bandhigtay FCA.
Waa tan macluumaadka aad u baahan tahay inaad gasho marka aad koonto ka furaneyso goob ganacsi.
✔️ Information Personal
Waxaad u baahan doontaa inaad gasho macluumaadkaaga shakhsiyeed. Tan waxaa ku jiri doona magacaaga oo buuxa, cinwaanka gurigaaga, taariikhda dhalashadaada, lambarka ceymiska qaranka, iyo faahfaahinta xiriirkaaga.
✔️ Macluumaadka Shaqada
Dilaalku wuxuu ubaahan doonaa inuu ogaado heerkaaga shaqo iyo dakhligaaga sanadlaha ah cashuurta kadib.
✔️ Joogitaanka Maaliyadeed
Waxaad u baahan doontaa inaad u sheegto dillaalka inuu ogaado waxa qiimahaaga qiyaasta ahi yahay, iyo haddii aad tafaariiqle tahay ama macmiil hay'adeed.
✔️ Khibrad Ganacsi Hore
Dilaalku wuxuu ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan khibradaada ganacsi ee hore. Tan waxaa ku jiri doona nooca hantida aad horay u ganacsan jirtay, iyo celceliska ganacsiga inta uu le'eg yahay.
Si aad ugu hogaansanaato sharciyada ladagaalanka lacagta la dhaqay, dhamaan meheradaha ganacsi ee ay maamusho FCA waxay u baahan doonaan inay xaqiijiyaan aqoonsigaaga. Nidaamku waa mid toos ah oo fudud oo aad u baahan tahay inaad geliso nuqul ka mid ah Aqoonsigaaga dawladdu soo saartay, iyo sidoo kale caddaynta cinwaanka.
Inkasta oo qaar ka mid ah dallaaliinta ay kuu oggolaanayaan inaad dhigato lacag ka hor inta aan hawsha xaqiijinta la dhammaystirin, ma awoodi doontid inaad ka baxdid illaa iyo inta dukumiintiyadaada la xaqiijinayo Sidan oo kale, waxaa ugu wanaagsan in nidaamka KYC (Baro Macaamiilkaaga) habka looga baxo isla marka aad furato koontada.
Marka ay timaado maalgelinta akoonkaaga dallaalnimada, waa in lagu siiyaa dhowr habab oo lacag bixin oo kala duwan. In kasta oo ay taasi ku kala duwanaan doonto dillaal-u-dilaal, haddana waxaan hoos ku taxnay habka ugu badan ee dhigaalka iyo ka-noqoshada.
Bit Debit iyo Kaararka Deynta
Lacag dhigashada kaarka deynta / kaarka deynta ayaa sida caadiga ah keenta in lacagaha isla markiiba la isla xisaabiyo Isha ku hay khidmadaha - gaar ahaan haddii aad isticmaaleysid kaarka deynta. In kasta oo dallaalku uusan wax lacag ah kaa qaadi doonin haddii aad dhahdo, bixiyaha kaarka deynta ayaa laga yaabaa inuu u qoondeeyo deebaajiga lacag hormarin ahaan. Hadday sidaas tahay, tani waxay soo jiidan kartaa khidmadda 3%, iyadoo dulsaarka isla markiiba la adeegsanayo.
Transfer Wareejinta Bangiga
Inta badan goobaha ganacsiga ee internetka ayaa aqbali doona wareejinta bangiga. Nidaamku aad ayuu uga gaabiyaa bixinta deynta / bixinta kaarka deynta, in kasta oo xadadka badanaa ay ka sareeyaan. Haddii deebaajiga lagu sameeyo Lacag-bixinnada Degdegga ah ee Boqortooyada Midowday, lacagaha waxaa laga yaabaa in lagu xisaabtamo isla maalintaas.
In kasta oo ay ka yartahay kaarka deynta / kaarka amaahda ama wareejinta bangiga, tiro ka mid ah dillaaliinta da'da cusub ayaa hadda aqbalaya boorsooyinka elektarooniga ah. Tan waxaa ka mid ah sida PayPal, Skrill, iyo Neteller. Kaydinta E-Wallet ma aha oo keliya lacag la'aan, laakiin inta badan kiisaska, waxay kuu oggolaanayaan inaad lacagtaada kala baxdo waqtiga ugu dhaqsaha badan.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ka faa'iideysato balaayiin-trillion pound forex space, markaa waxaad iibsaneysaa oo iibinaysaa lacagaha. Fikradda guud waxay tahay in macaash laga helo sida iyo goorta sarifka lacagaha sarifka dhaqaaqo.
Sidan oo kale, waxaad ka ganacsan doontaa forex 'couple', oo ka kooban laba lacagood oo kala duwan. Tusaale ahaan, haddii aad dooneysay inaad ka ganacsato pound pound sterling ka soo horjeedka euro, markaa waxaad u baahan tahay inaad ka ganacsato GBP / EUR.
Markii sidaa la yidhi, qaar ka mid ah dallaaliinta ayaa qori doona in ka badan 100 laba nooc oo lacag ah Lammaanayaasha lacagta ah ayaa loo kala qaaday saddex qaybood oo waaweyn - waaweyn, carruur yar yar, iyo qalaad.
Jo Kuwa waaweyn
Sida magaca ka muuqata, lammaanaha waaweyn waxay ka kooban yihiin laba lacagood 'waaweyn'. Tan waxaa ku jiri doona lacagaha laga helo dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka, sida Doolarka Mareykanka, Pound-ka Ingiriiska, Yuro, Japanese-ka Japan, iyo Swiss franc.
Haddii aad hadda uun ka bilaabanayso adduunka ganacsiga qadiimiga ah, waxaa lagugula talinayaa inaad ku ekaato lammaano waaweyn. Tani waa sababta oo ah kuwa waaweyn waxay la kulmaan heerar hooseeya oo isbeddel ah, faafitaanno adag, iyo tuulmo xisaabeed.
Lammaanaha yar-yar waxay ka koobnaan doonaan hal lacag oo waaweyn iyo hal lacag oo dareere ah. AUD / USD waa tusaalaha koowaad ee lammaanaha yar. Doolarka Mareykanka wuxuu matalaa lacagta ugu weyn ee labada lamaane, halka doolarka Australiya uu yahay lacagta yar ee la dalbado.
In kasta oo carruurta yaryar ay wali ka faa'iideystaan ​​qaddar lacageed oo fara badan, faafitaannada ayaa aad uga ballaaran kuwa waaweyn. Tani waxay ka dhigan tahay in carruurta yar yar ee ganacsiga ahi ay qaali ku yihiin muddada dheer. Iyadoo taas la sheegayo, isbeddelku waxyar ayuu ka sarreeyaa lammaanaha yaryar, sidaa darteed waxaa jira fursado badan oo lagu kasbado guulo waaweyn.
Lammaanaha lacagaha qalaad waxay ka koobnaan doonaan lacag soo baxda iyo lacag weyn. Tan waxaa ka mid noqon kara Doolarka Mareykanka iyo Fiyatnaamiis dong, ama lacagta giniga ah ee lugaha Turkiga.
Si kastaba ha noqotee, lammaanaha qalaad waxay noqon karaan kuwo aad u kacsan, faafitaankuna badanaa aad buu u ballaadhan yahay. Tani waa sababta aad ugu fiicantahay inaad iska ilaaliso qalabixinta illaa aad ka baraneyso ka ganacsiga Forex heer sare.
Sidee Ganacsi Forex u shaqeeyaa?
Markaad dooratid lammaane lacageed oo qaata riyooyinkaaga, markaa waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso jidka suuqa u mari doono. Kahor intaanan guda galin aasaasiga, waxaa muhiim ah in la caddeeyo farqiga u dhexeeya 'iibsiga' iyo 'iibinta' amarka ku saabsan ganacsiga forex trading.
Haddii aad aaminsan tahay in lacagta lagu dul taagay dhinaca bidix labada nin ayaa tagaya kordhiyo qiime ahaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad dhigto a iibso amar.
Haddii aad aaminsan tahay in lacagta lagu dul taagay dhinaca midig labada nin ayaa tagaya kordhiyo qiime ahaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad dhigto a iibso amar.
Tusaale ahaan, aan dhahno waad iibineysaa GBP / USD. Haddii aad dareentay in GBP ay u badan tahay inuu ku kordho qiimaha marka loo eego USD, markaa waxaan dhigi doonnaa dalab iibsi. Sidoo kale, haddii aad dareentay in USD ay ka kordhayso GBP, waxaad dalban lahayd amar iibin ah.
Tusaalaha 'Iibsasho' Amarka Ganacsi ee Forex
Ku dhaji mawduuca GBP / USD, ha u sheego 'inaad dhigtay £ 500' iibsasho 'amar. Taas macnaheedu waa inaad rumeysan tahay in GBP uu ku kordhin doono qiimaha ka dhanka ah USD.
Qiimaha GBP / USD hadda waa 1.32
Waxaad dhigtay dalab iibsi ah £ 500
GBP / USD waxay kordheysaa 1.34, taasoo macnaheedu yahay in GBP uu ka sii xoogaysanayo USD
Tani waxay ka dhigan tahay kororka 1.51%
Faa'iidadaadu waxay gaaraysaa £ 7.55 (£ 500 x 1.51%)
Tusaalaha 'Sell' Order in Forex Trading
Tusaalahan, waxaan sidoo kale la socon doonnaa GBP / USD. Kaliya markan, waxaan dhigaynaa amar 'iibin' ah. Tan macnaheedu waa inaad rumeysan tahay in USD ay ka fiicnaan doonto GBP.
Waxaad dhigtay sell 1,500 oo dalab iib ah
GBP / USD waxay hoos ugu dhacday 1.29, taasoo la micno ah in USD ay ka sii xoog badineyso GBP
Tani waxay ka dhigan tahay hoos u dhac 2.27%
Faa'iidadaadu waxay gaaraysaa £ 34.05 (£ 1,500 x 2.27%)
Baro Ganacsiga CFD-yada
Qaybta labaad ee ugu weyn ee goobta ganacsiga ee internetka waa tan CFDs. Sidii aan si kooban horey u soo sheegnay, CFD-yada ayaa kuu oggolaanaya inaad iibsato oo aad iibiso ficil ahaan nooc kasta oo hanti ah oo la qiyaasi karo. Tani waa sababta oo ah adiga looma baahna inaad lahaato ama keydiso hantida aasaasiga ah si aad ugu maal gashato.
Taabadalkeed, CFDs waxay kaliya raadraacaan qiimaha dhabta ah ee adduunka ee hantida su'aasha laga qabo. Sidan oo kale, CFD-yada ayaa aad ugu habboon helitaanka suuqyada kuwaas oo ay adag tahay in la gaaro.
Hoos waxaan ku taxnay fasalada hantida ugu weyn ee CFDs daboolaan.
✔️ Kaydka iyo saamiyada
R Heerarka Xiisaha
Met Bir adag
Sidee CFD Trade u shaqeeyaa?
Marka la eego sida ganacsiga CFD dhab ahaantii u shaqeeyo, tani waxay aad ugu egtahay iibsashada iyo iibinta lammaanaha forex. Farqiga ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in lagugula socodsiiyo marxaladdan waa ereybixinta. In kasta oo aan forex nahay waxaan caadi ahaan go'aamineynaa ganacsiyada sidii iibsi ama iibin amar, booska CFD waxaan u adeegsannaa ereyada 'dheer' iyo 'gaaban'
Intaa waxaa sii dheer, CFDs uma yimaadaan labo labo sida forex. Taa bedelkeeda, waxaad ka ganacsaneysaa hanti ka soo horjeedda qiimaha dhabta ah ee adduunka ee lacagta ugu badan, taas oo inta badan ah US dollar. Tusaale ahaan, haddii aad ku ganacsaneyso CFDs qaab kayd ah, saliid, gaaska dabiiciga ah, ama dahab - hantida badanaa waa lagu qiimeeyaa USD.
Hadaad aamin santahay in hantidu socoto kordhiyo qiime ahaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad dhigto a dheer amar
Hadaad aamin santahay in hantidu socoto hoos u dhac qiime ahaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad dhigto a gaaban amar
Tani waa mid ka mid ah dhinacyada soo jiidashada badan ee ganacsiga CFDs, maadaama aad had iyo jeer heli doonto ikhtiyaarka iibinta gaaban. Halkani waa halka aad kaga fikireyso qiimaha luminta hantida. Tani waa wax haddii kale ay adkaan lahayd in lagu soo celiyo meheradda maalgelinta dhaqameed sida macaamiil tafaariiqle ah.
Haddii aad raadineyso inaad ku ganacsato saamiyada muddo-dheer, markaa waxaad ugu fiicnaan doontaa inaad ka iibsato saamiyadaada aad dooratay shirkad ganacsi oo caadi ah. Tani waa sababta oo ah adigu waad yeelan doontaa saamiyada gebi ahaanba, taas oo macnaheedu yahay inaad caado u noqon doonto dhowr ilaalin maalgashi.
Muhiimad ahaan, tan waxaa ka mid ah xuquuqda sharciga ah ee wixii lacag-bixin ah ee qaybinta ah ee ay qaybiso shirkadda ay khusayso - oo u dhiganta tirada saamiyada ee aad hayso.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad barato inaad ka ganacsato saamiyada muddo-gaaban, waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato barmaamijka 'CFD platform'. Tani waa sababta oo ah khidmadaha la xiriira iibsashada iyo iibinta saamiyada ee dhaqanka dhaqameed ayaa aad uga sarreeya CFDs. Intaa waxaa sii dheer - macmiil tafaariiq ahaan waxaad heli doontaa wax yar, haddii ay jirto, fursad aad ku iibin karto gaabin saamiga aad dooratay. Mar labaad, tani waa wax ay bixiyaan dhammaanba barnaamijyada CFD.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ka gasho suuqyada saamiyada caalamiga ah khadka tooska ah, waxaad yeelan doontaa laba ikhtiyaar - iibsiga iyo iibinta saamiyada shakhsiyadeed, ama maalgashiga jaantus.
✔️ Ka Ganacsi Saamiyada Shaqsiyeed
Haddii aad leedahay xirfadaha looga baahan yahay inaad ku maal gashato shirkado shaqsi, waxaad heli doontaa kumanaan kun oo saamiyada CFD ah. Tan waxaa ka mid ah shirkado buluug-buluug ah oo ku taxan suuqyada caanka ah sida NASDAQ iyo London Stock Exchange, iyo sidoo kale shirkadaha yar yar illaa dhexe.
Haddii aad doorato marinka CFD, qiimaha saamiyadaada aad dooratay ayaa muraayad u noqon doona qiimaha dhabta ah ee hantida. Tusaale ahaan, haddii qiimaha saamiyada Tubaakada British American ay kor ugu kacdo 2.3% muddo 24 saac gudahood ah, CFD-keeda ayaa sidoo kale kordhin doona 2.3%.
✔️ Ka Ganacsiga Tusmada Suuqa Suuqa
Haddii aad jeceshahay inaad ka ganacsato saamiyada iyo saamiyada, laakiin aadan haysan aqoonta loo baahan yahay si aad u doorato shirkado shaqsiyeed, waxaa laga yaabaa inay mudan tahay tixgelinta tusmada suuqa saamiyada.
Sidoo kale loo yaqaan 'indices', tusmooyinka suuqyada saamiyada ayaa kuu oggolaanaya inaad ka fikirto boqolaal shirkadood hal ganacsi oo keliya - ka dibna aad u kala duwato jagadaada dhammaan warshadaha.
Tusaale ahaan, maalgashiga S & P 500, waxaad ka iibsan kartaa saamiyada 500 oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee Mareykanka ku qoran. Sidoo kale, tusmada FTSE 100 waxay kuu ogolaaneysaa inaad maal gashato 100-ka shirkadood ee ugu waaweyn ee ku taxan London Stock Exchange.
Mar labaad, haddii aad doorato tusmada suuqa saamiyada oo ah qaab CFD, waxaad heli doontaa ikhtiyaarka inaad ku dheeraato ama ku dheeraato. Sidan oo kale, waxaad wali fursad u heli laheyd inaad macaash sameyso xitaa marka suuqyada saamiyada ee ballaaran ay hoos u dhacaan.
Waa maxay Faafitaanka?
Iyadoo aan loo eegin haddii aad ka ganacsaneyso forex ama CFDs - waxaad u baahan tahay inaad faham buuxa ka hesho faafitaanka. Qaabkeeda aasaasiga ah, tani waa faraqa u dhexeeya 'iibso' iyo 'iibinta' qiimaha. Dusha sare ee guddiyada ganacsiga, faafitaanku wuxuu hubiyaa in dillaaliinta internetka ay lacag sameeyaan.
Baaxadda faafitaanka ayaa muhiim kuu ah ganacsade ahaan, maadaama ay muujineyso khidmadaha aad sida dadban u bixinayso. Tusaale ahaan, haddii uu jiro farqi u dhexeeya 0.5% faafitaanka marka la iibinayo saamiyada, tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad sameyso ugu yaraan 0.5% faa'iidooyinka kaliya inaad jabiso xitaa.
Tusaalaha Faafitaanka CFDs
Habka ugu fudud ee loo xisaabiyo faafitaanka marka laga ganacsanayo CFDs waa in si fudud looga shaqeeyo farqiga boqolkiiba u dhexeeya iibsiga iyo iibinta qiimaha.
Waxaad dooneysaa inaad 'waqti dheer' ku gasho saliida
Dilaalkaagu wuxuu ku siinayaa 'iibso' qiimo dhan $ 71
Qiimaha 'iibin' waa $ 69
Tan macnaheedu waa faafitaanku waa faraqa u dhexeeya $ 69 iyo $ 71
Marka loo eego boqolkiiba, tani waa faafitaanka 2.89%
Iyadoo aan loo eegin haddii aad go'aansato inaad ku sii dheeraato ama ku gaarto saliidda, waxaad bixin doontaa faafitaanka 2.89%. Tani waxay ka dhigan tahay waxaad u baahan doontaa inaad sameyso ugu yaraan 2.89% faa'iidooyinka kaliya inaad jabiso.
Hadaad tagto dheer saliidda, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso $ 71. Haddii aad isla markiiba ka tagto booskaaga, waxaad ku sameyn lahayd sicir iib ah $ 69. Sidan oo kale, waxaad u baahan tahay qiimaha saliidda kordhiyo by 2.89% kaliya jebin xitaa.
Hadaad tagto gaaban saliidda, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso $ 69. Haddii aad isla markiiba ka tagto booskaaga, waxaad ku sameyn lahayd sicir iib ah $ 71. Sidan oo kale, waxaad u baahan tahay qiimaha saliidda hoos u dhac by 2.89% kaliya jebin xitaa.
Waa maxay leverage?
Kabaalayntu waa aalad xiiso iyo khatar badan leh oo aad ka heli doonto inta badan goobaha ganacsiga ee internetka. Marka la soo koobo, dulqaadku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka ganacsato heerar ka sarreeya waxa aad ku haysato koontadaada dallaalnimo. Qaddarka qaaska ah waxaa go'aamiya qodob, sida 2: 1, 5: 1, ama 30: 1. Markay sare u kacdo cunsurka, ayaa inbadan oo aad ka ganacsaneysaa sidaasna - waxay sii kordheysaa macaashkaaga ama qasaarahaagu.
Tusaale ahaan, aan dhahno waxaad kaliya ku leedahay koontadaada £ 300. Waxaad dooneysaa inaad ku dheeraato gaaska dabiiciga ah, maadaama aad dareento in hantida si aad ah loo qiimeeyay. Sidan oo kale, waxaad codsaneysaa leverage 10: 1, oo macnaheedu yahay inaad dhab ahaantii ku ganacsaneyso £ 3,000.
Tusaalahan, £ 300-kaaga hadda waa farqiga udhaxeeya. Haddii qiimaha meheraddaadu hoos ugu dhacdo 10: 1 (100/10 = 10%), waxaad waayi doontaa geeskaaga oo dhan. Tan waxaa loo yaqaan 'dareere'. Sidoo kale, haddii farqigaagu ahaa £ 300 oo aad ka ganacsan jirtay 25: 1, waa lagaa dareemayaa haddii hantidu hoos ugu dhacdo 25: 1 (100/25 = 4%).
Haddii aad tahay ganacsade tafaariiqle oo fadhigiisu yahay Boqortooyada Midowday (ama waddan kasta oo xubin ka ah Yurub oo arrintani khuseyso), waxaa lagaa jari doonaa xaddidaadaha deynsiga ee ay dejiyeen Hay'adda Nabadgelyada iyo Suuqyada Yurub (ESMA).
Xaddidaadaha Kaabashada ESMA
30: 1 lammaanaha waaweyn ee forex
20: 1 lammaanaha forex ee aan muhiimka ahayn, dahab, iyo indices waaweyn
10: 1 loogu talagalay badeecadaha aan ahayn dahabka iyo tusmooyinka aan caadiga ahayn
5: 1 keyd shaqsiyeed
2: 1 loogu talagalay cryptocurrencies
Amarada Suuqa: Maxay yihiin sideese u shaqeeyaan?
Haddii aad rabto inaad barato ka ganacsiga internetka, waa wax aad muhiim u ah inaad ogtahay sida amarrada suuqyadu u shaqeeyaan. Asal ahaan, tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si toos ah u xirto ganacsiyada marka dhibcaha qiimaha qaarkood la taabto.
Tusaale ahaan, haddii ganacsigu kaa caawiyo, waxaad damaanad qaadi kartaa faa'iido adiga oo si otomaatig ah u xira ganacsiga. Si siman, haddii ganacsigu kaa horyimaado, amarka suuqa ayaa ka bixi kara ganacsiga sidaasna - yareynta khasaarahaaga.
Hoos waxaan ku taxnay qaar ka mid ah amarrada suuqa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in lagugu wargeliyo.
Order Amarka Joojinta-Loss
Sida magaca ka muuqata, amarka joojinta-luminta ayaa yareyn doonta guud ahaan soo-gaadhistaada ganacsi lumis ah. Tusaale ahaan, aan dhahno waxaad kufikireysaa Bitcoin, waxaadna fureysaa ganacsi qiimahiisu yahay £ 2,000 qiimo iibsi ah $ 9,500.
Sidan oo kale, waxaad rajeyneysaa in qiimaha Bitcoin uu kordho. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale dhigtaa amar joojin-lumis ah haddiiba ay wax kaa hor yimaadaan. Maaddaama aadan rabin inaad lumiso wax ka badan 5% qiimaha ganacsigaaga, waxaad dhigeysaa amar joojinta-lumis ah $ 9,025.
Dhowr maalmood ka dib, Bitcoin ayaa taangiyaal ah oo lumisay 20% qiimaha. Asal ahaan, waxaad waayi lahayd £ 400 (20% ganacsigaaga £ 2,000). Si kastaba ha noqotee, sida aad u rakibtay joogsi-macquul ah $ 9,025, waxaad u yareysay lumintaada kaliya £ 100 (5% of £ 2,000).
Order Amarka Joogtada-Khasaaraha ah
Sida ugu macquulsan ee amarka joojinta-lumisku u noqon karo, marna ma jiraan wax damaanad ah in amarkaaga la buuxin doono. Tusaale ahaan, haddii aad dul dhigtay amar joojin-lumis ah GBP / USD inta lagu gudajiray natiijada aftida Brexit, uma badna in amarku uu heli lahaa iibsade. Tani waa sababta oo ah GBP / USD waxay soo martay xilli isbeddel daran.
Taas bedelkeeda, 'dammaanad qaad' amarka joojinta-luminta ayaa had iyo jeer la jaan qaadi doona, maadaama ay si wax ku ool ah u dhexeyso adiga iyo dallaalka. Xusuusnow, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso khidmad aad u sareysa si aad u fuliso amar dammaanad joogsi-lumis ah, inkasta oo ay mudan tahay in la bixiyo.
✔️ Qaado -Barashada Amarka
In kasta oo ay muhiim tahay in laga ilaaliyo ganacsigaaga inuu u badnaado khasaarooyin waaweyn, haddana waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad dejiso amar si otomaatig ah loo xidho ganacsi markaad macaash hesho. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad seegto fursad aad ku xirto faa'iidooyinka haddii aadan ku jirin qalabkaaga desktop-ka. Sidan oo kale, amarada macaashka-macaashku waxay xirayaan ganacsiga qiimo horey loo qeexay.
Tusaale ahaan, haddii aad lacag kaga ganacsaneyso $ 18.24, oo aad jeceshahay inaad xirto-macaashka markii hantidu kordho 10%, waxaad ku dalban kartaa dalab qaadasho-macaash $ 20.06. Haddii qiimaha uu gaaro $ 20.06, ganacsigu si toos ah ayuu u xirmayaa macaashka 10%.
Marnaba Marna Ha Istaagin Ganacsi
Ogeysiisyada signalka-waqtiga dhabta ah markasta oo signiin la furo, la xiro ama la Cusbooneysiiyo
Digniinta degdega ah ee emaylkaaga iyo moobilkaaga.
Heerarka Qiimaha Gelida
Heerka qiimaha gelitaanka ee calaamado kasta Kaliya dooro mid ka mid ah Macaamiishayada Sare ee liiska kor ku xusan si aad tan oo dhan u hesho bilaash.
GBP / USB iibso
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo wararka suuqa, dallacaadaha gaarka ah iyo joornaalada. Waan aqriyay, fahmay oo aqbalay Shuruudaha & Shuruudaha iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Calaamadaha Forex ee ugu Fiican 2021
Sida loo isticmaalo Calaamadaha Forex
Live Forex Heerarka & Jaantusyada
Tilmaamaha Forex Brokers
Sida loo doorto Dilaal
Calaamadaha Crypto Telegram
Baro 2 Ganacsiga waa magac ganacsi oo loo yaqaan 'Gadget Geek Online Ltd'
20-22 Wenlock Road, London N1 7GU Lambarka Shirkadda Diiwaangashan: 11746374
Macluumaadka ku jira barta internetka ee Learn2.trade iyo gudaha Kooxda Telegram Group waxaa loogu talagalay ujeedooyin waxbarasho mana aha in loo qaato talo maalgelin. Ka ganacsiga suuqyada maaliyadeed waxay wataan khatar aad u sareysa waxaana laga yaabaa inaanay ku habboonayn dhammaan maalgashadayaasha. Kahor ganacsiga, waa inaad si taxaddar leh u tixgelisaa ujeedooyinkaaga maalgashi, khibrad, iyo rabitaankaaga halista. Kaliya ku ganacso lacag aad diyaar u tahay inaad lumiso. Sida maalgashi kasta, waxaa jira suurtagalnimada inaad sii joogteyn karto khasaaraha qaar ama dhammaan maalgashigaaga inta aad ganacsiga leedahay. Waa inaad raadsataa talo madaxbanaan kahor ganacsiga kahor haddii aad wax shaki ah qabtid. Waxqabadkii hore ee suuqyada maahan tilmaame lagu kalsoonaan karo ee waxqabadka mustaqbalka.
Learn2.trade wax mas'uuliyad ah iskama saareyso luminta ka dhalata waxyaabaha laga helo gudaha Kooxaheena Telegram. Markaad xubin iska diiwaangeliso waxaad qiraysaa inaanan bixinaynin talo maaliyadeed iyo inaad adigu go'aan ka gaadhayso meheradaha aad suuqyada ka dhigato. Wax aqoon ah uma lihin heerka lacagta aad ku ganacsanayso ama heerka halista aad u marayso ganacsi kasta.
Websaytka Learn2.trade wuxuu adeegsadaa cookies si uu kuu siiyo khibrada ugu fiican. Adoo booqanaya boggayaga internetka oo leh biraawsarkaaga si loo oggolaado cookies, ama aqbalida ogeysiiskayaga Nidaamka Kukiyada waxaad ogolaatay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, oo faahfaahinaya Nidaamkayaga Kukiyada.
Xuquuqda daabacaadda Learn 2021 Baro 2 Ganacsiga
U dhig $ 250 si aad u hesho VIP Bilaash ah Calaamadaha Forex ee 1 Sannad!
Hel Calaamadaha VIPU dhig $ 250 si aad u hesho VIP Bilaash ah Calaamadaha Forex ee 1 Sannad! Ka ganacsiga MT4 oo leh Leverage ilaa 1: 500!
Waxaan isticmaalnaa cookies si loo hubiyo in aan ku siin waayo-aragnimo ugu fiican ee website-kayaga. Haddii aad sii isticmaasho this site waxaan u qaadan doonaa in aad ku faraxsan la jira.OkQaanuunka Arrimaha Khaaska ah